Inkqubo yokubilisa ibhoyila kunye nolawulo lwekhwalithi ye-boiler kunye nokuvavanywa koomatshini boiler kwibhoyila kwindawo yokusebenzela kunye neLebhu- iXuzhou Double Rings Machinery Co., Ltd.
Inkqubo ye-Double Rings Boiler enkulu ekuveliseni
Inyathelo Velisa Inkqubo
Ukusika Ithunyelwe ngokuzenzekelayo Umatshini wokusika we-CNC usetyenziselwa ukusika ubungakanani njengoko kufuneka.
Uxinzelelo lobushushu Yamkela inkqubo yokunyathela ukufudumeza kwegumbi, ulawulo lobushushu oluzenzekelayo kunye nesixhobo sokurekhoda, Nje ukuba kwenziwe iTywina
Ukuphelisa umatshini Inkqubo yokuPhela kweLathe enkulu enkulu
Ukuvalwa kwesikhongozeli Ukwamkela itekhnoloji yokutsha eshushu ethe kratya, ubuchule bokwenza kunye nebhokisi yokuvala iteknoloji ikwindawo ekhokelayo.
Umbhobho wamanqatha Inkqubo hydraulic engundoqo ukugoba kunciphisa kakhulu isixa ityhubhu thinning.
Ukujikeleza I-hydraulic CNC ezenzekelayo yokuqengqeza umatshini wokuhambisa iplatifomu ukunciphisa ukungahambi kakuhle kunye ne-angle angle yesilinda esidibeneyo ukuphucula ukusebenza kunye nomgangatho.
Welding Ukuntywiliselwa kwe-arc kuzenzekelayo nge welding, kwaye ukubonakala kwe-weld kuthe tye kwaye kuhle.
Uvavanyo olungenambeko Onke amacandelo oxinzelelo afana negubu emva kokuwelda kunye nokudibana kufuneka angakhange ahlolisise i-X-ray ukuqinisekisa umgangatho we-weld.
Ukubhola Indibano ijijelwe kwisiphawuli
Ukuwelda kunye Inkangeleko ye-weld kufuneka ibe ntle.
Ukuhlolwa kwe-Hydraulic Imveliso egqityiweyo kufuneka ihlolwe ngokuhlolwa kwe-hydraulic ukuhlangabezana neemfuno zoxinzelelo loyilo.
IBoiler yokwakha I-arch yangaphambili yamkela i-arch eyenziwe ngamanzi-ekhula, eyandisa kakhulu i-arch yangaphambili. Ngexesha elifanayo, ukuphakama kwe-arch yangaphambili kuphakanyisiwe, ukuze i-flue igesi ihambise ngokupheleleyo kwi-arch yangaphambili ukunyusa i-radiation yecandelo le-grate; I-arch yangasemva izitena, kwaye ukugubungela kuyahlengahlengiswa. Amafutha avuthayo anokulungelelaniswa ngakumbi.
Ukupakishwa kwepeyinti Ukubonakala kwamacandelo afanelekileyo kupeyintiwe; iinxalenye zokupakisha zangaphandle ze-boiler zenziwe ngumatshini wokushicilela we-hydraulic, kwaye ubulukhuni bulungile; ipeyinti yenziwa ngevaki yokubhaka, kwaye imbonakalo iqaqambile, igudile kwaye inobuhle.
1 Ingxelo yoBalo lwaMandla lweZinto eziFakelweyo emva kokuba kuhlolwe umatshini wokuhlola.
2 I-100% ye-NDT (uhlolo olungonakalisiyo) ingxelo yeplate yensimbi, ityhubhu kunye nentonga yokuloba;
3 I-100% ye-X-ray yokuhlola ingxelo (umthungo welding): ukuqinisekisa umgangatho we-boiler wonke;
4 Ingxelo yovavanyo lwe-Hydraulic: qinisekisa umgangatho oqhelekileyo wokusebenza kunye nokhuseleko;
5 Ingxelo yovavanyo yomntu wesithathu: liZiko eliKhethekileyo lokuVavanya uKhuseleko loKhuseleko lweeZiko kwiPhondo le Jiang Su
6 Inqanaba leMveliso yeMveliso yeBanga-A. Imveliso ifikelela kwiMigangatho ye-YEC yaseYurophu.
Uvavanyo loomatshini be-Boiler kwindawo yokusebenzela kunye naseLebhu
Hayi. Igama Umzekelo Qty
1 Imitha yedijithali yeklasikhi kunye noHlobo lweSulfur HV-4B 1set
2 Isantya esiphakamileyo sokuzibona somlilo HB-2H 1set
3 Isikali soMbane JA1003 1set
4 Iifoto 723 1set
5 Isikali seMetalllography XJB-2A 1set
6 IHydraulic Multi-cebisa uMatshini wovavanyo WE-100 1set
7 I-WE-600A 1set
8 Umatshini wokuvavanya i-concussion JB-30 1set
9 Imitha yokujongwa JS 1set
10 I-X Ray Crack Detector XXH3005 1set
13 Isixhobo sokukhangela i-Ultrasonic I-CTS-22 2sets